खेलकुद Archives - Page 22 of 35 - Dna Nepal
पोखरामा प्याराग्लाईडिङसँग ठोकिँदा विदेशी नागरिक घाईते २६ कार्तिक २०७५, सोमबार १३:१७
पोखरा, कार्तिक २६ । पोखराको सराङकोटमा प्याराग्लाईडिङसँग ठोकिएर विदेशी नागरिक घाईते भएका छन् । तोरिपानीको टेकअप स्पटमा नेपाल फ्लाई कम्पनीको प्याराग्लाईडिङलाई पाईलट दिलकुमार लिम्बुले उडान भर्ने क्रममा हेरिरहेका ब्राजिलियन नागरिक ४९ बर्षका..
सन्दीप लामिछानेसहित ४ खेलाडीलाई कारबाही १९ कार्तिक २०७५, सोमबार ०४:२६
पोखरा, कार्तिक १९ । पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा खेल भावना विपरित व्यवाहार देखाएका ४ खेलाडी कारबाहीमा परेका छन् । शनिबार पोखरा रंगशालामा भएको खेलमा अभद्र व्यवहार देखाएका विराटनगर टाइटन्सका कप्तान सन्दीप..
खेल हेरेर निस्किँदा फुटबल क्लब लेस्टर सिटीका मालिकसहित ५ जनाको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु १२ कार्तिक २०७५, सोमबार ०२:२९
एजेन्सी, कार्तिक १२ । इङ्लिस फुटबल क्लब लेस्टर सिटीका मालिकको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । आफ्ना थाई मालिक ६० वर्षीय भिचाई श्रीभादानाप्रभाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको क्लबले पुष्टि गरेको छ । उनीसहित पाँच जनाको मृत्यु भएको हो..
विश्वकप क्रिकेटको ट्रफीमा माछापुच्छ्रेको हिउँ टल्किँदा…..(फोटो फिचर) १० कार्तिक २०७५, शनिबार ०४:३१
पोखरा, कार्तिक १० । विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी पोखरा ल्याईएको छ । शनिवार विहान पोखराका विभिन्न ठाउँमा ट्रफी प्रदर्शन गरिएको छ । अहिले पोखरा रंगशालामा ट्रफी राखिएको छ । पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल)का लागि सबै खेलाडी र क्रिकेट सम्बद्ध व्यक्ति रहेकोले..
आहा ! हिमाली शहरमा विश्वकै दुर्लभ खेल, माछापुच्छ्रे ताकेर वल हिर्काउँछन् खेलाडी (फोटो फिचर) ९ कार्तिक २०७५, शुक्रबार ०४:२२
पोखरा, कार्तिक ९ । १२ बर्षअघिको कुरा । जतिबेला पोखरा रंगशालाभित्र क्रिकेट मैदान बनेको थिएन । मैदान बनाउन डोजर चलाईएको थियो । जताततै ढुंगैढुंगा थिए । ढुंगे मैदान थियो । त्यही ढुंगे मैदानमा क्रिकेट प्रेमी बलिङ र व्याटिङ गरिहेका थिए । उत्तरमा..
पोखरा प्रिमियर लिग आजदेखि, उद्घाटनमा पोखरा र विराटनगर भिड्दै
पोखरा, कार्तिक ९ । सर्वा्धिक पुरस्कार राशिको पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदैछ । पोखरा रंगशालामा आजबाट सुरुहुने लिगको उद्घाटन खेलमा विराटनगर टाइटन्स र पोखरा पल्टनबीच प्रतिस्पर्धा हुदैछ । खेल उद्घाटन सत्र..
पोखरा प्रिमियर लिगको विजेतालाई २७ लाख रुपैयाँ पुरस्कार ७ कार्तिक २०७५, बुधबार १३:२१
पोखरा, कार्तिक ७ । शुक्रबारदेखि पोखरा रंगशालामा शुरु हुने टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता पोखरा प्रिमियर लिगको पुरस्कार राशी सार्वजनिक गरिएको छ । फ्रेन्चाईज टिम बीचको प्रतिस्पर्धामा नेपालमा सञ्चालित क्रिकेटको प्रिमियर लिगको पुरस्कार राशी..
अष्ट्रेलियाकाे बिग बासमा खेल्दै सन्दीप, पारिश्रमिक ६० हजार डलर ६ कार्तिक २०७५, मंगलवार ०२:१५
काठमाण्डौं, कार्तिक ६ । नेपालका युवा सनसनी बलर सन्दीप लामिछानेले अस्ट्रेलियाको बिग बास क्रिकेट लिग खेल्ने भएका छन् । उनलाई मेलबर्न स्टार्सले आउँदो सिजनका लागि लिएको छ । सन्दीपले कीर्तिमानी रकममा बिग बास खेल्न लागेका हुन् । उनी बिग बास खेल्ने..
अविनाश स्मृति भलिवल कप नामजुङलाई १ कार्तिक २०७५, बिहीबार ०३:४३
गोरखा, कार्तिक १ । गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका ९ नामजुङमा भएको दोश्रो संस्करणको अविनाश स्मृति कप जनआदर्श युवा क्लव नामजुङले जितेको छ । प्रतियोगितामा ५ टीमलाई पछि पार्दै जनआदर्शले पुरस्कार सहित कप उचालेको हो । पहिलो भएको जनआदर्शले ७५ हजार ७ सय..
पोखरा रंगशालामा छिर्दै हुनुहुन्छ ? पैसा लिएर जानुस् ९ आश्विन २०७५, मंगलवार १५:४८
पोखरा, असोज ९ । पोखरा रंगशाला छिर्दै हुनुहुन्छ ? खल्तीमा हेर्नुस् पैसा छ कि छैन ? किनकी अवदेखि पोखरा रंगशाला छिर्नलाई पैसा तिर्नुपर्छ । रंगशालामा छिर्ने सर्वसाधारणदेखि खेलाडीले समेत पैसा तिनुपर्ने नियम बनाईएको हो । सर्वसाधारणका लागि वार्षिक ५..